मध्यमवर्गिय परिवारका लागि विवाह निकै झन्झटिलो र खर्चिलो हुनेगर्छ । तर, यो सामाजिक परम्परा निर्वाह गर्नैपर्ने बाध्यताले धेरैलाई ऋणात्मक अवस्थामा पुर्रुयाउने गर्छ । वैवाहिक समारोह, भोजभत्तेर, गरगहना, दाईजो जस्ता अनेक कुराले विवाह ‘बोक्नै नसक्ने भारी’ बन्नेगर्छ । तर, जोसँग प्रशस्त धनदौलत छ, उनीहरुको विवाह कस्तो हुन्छ होला ? विवाहमा उनीहरुको सान शै कत कस्तो हुँदो हो ? विवाहको तामझाम कस्तो हुँदो हो ? के(कस्ता पाहुना विवाहमासहभागी हुँदो हो ? भोज(भत्तेर कस्तो चल्दो हो ? आकाश अम्बानीको विवाहले उल्लेखित जिज्ञासा मेट्न केही हदसम्म मद्दत गर्छ । आकाश अम्बानी, जो भारतका सर्वा्धिक धनाड्य मुकेश अम्बानीका छोरो हुन् । आकाशले हालै श्लोका मेहतासँग विवाह गरेका थिए । उनीहरुको विवाह त्यसैपनि भव्य हुने भयो । घतलाग्दो त के भने, विवाहको सुरुवातमा उनीहरुले गरिब एवं असाह्यलाई भोजन गराएका थिए । अघिल्लो बर्ष डिसेम्बर महिनामा मुकेश पुत्री ईशा अम्बानीको विवाह भएको थियो । उनको विवाहमा बलिउड स्टार्सदेखि राजनीतिज्ञ, खेलाडीहरुको सहभागिता थियो । अमेरिकाको राजनीीतमाखास दख्खल राख्ने हिलरी क्लिन्टन पनि उक्त विवाहमा पाहुना बनेकी थिइन् । ईशाको वैवाहिक समारोहको भव्यताले त्यसबेला धेरैलाई चकित तुल्याएको थियो । उनको विवाहमा मुम्बईको अम्बानी हाउस फूल र लाइटले सजाइएको थियो । यसपालीमुकेश पुत्रको विवाह भयो । विवाहको तयारी विगत लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । उनीहरुको विवाह मुम्बईस्थितजियो वल्र्ड सेन्टरमा यही शनिबार धुमधामसँग भयो । । आमाशको विवाह हीरा कारोबारी रसेल मेहताकी सबैभन्दा कान्छी छोरी श्लोका मेहतासँग भएको हो । सन् २००९ मा धीरुभाई अम्बानी इन्टरनेशनल स्कुलबाट आईबी डिप्लोमा प्रोगाम पुरा गरेर आकाशले सन् २०१३ मा अमेरिकाको ब्राउन युनिभर्सिटी बाट बिजनेस कमर्समा ग्राजुएसन गरेका थिए । ग्राजुएसनपछि उनी रिलायन्स जियोइन्फोकम लिमिटेडको साथमा छन् । आकाशको अघिल्लो बर्ष गोवामा इंगेजमेन्ट भएको थियो, जसमा उनका परिवारका नजिकका नातेदारहरुको उपस्थिती थियो । श्लोका, रसेल मेहता र मोना मेहताका तेस्रो सन्तान हुन् । रसेल मेहता रोजी ब्लू डायमन्डस्का प्रवन्ध निर्देशक हुन् । उनी विश्वकै ठूला हीरा व्यवसायीमा उनको नाम आउँछ । अम्बानी र मेहता परिवार एकआपसमा राम्ररीपरिचित छन् । आकाश र श्लोका एकसाथ धीरुभाई अम्बानी इन्टरनेशनल स्कुलमा पढेका थिए । सन् २००९ मा धीरुभाई अम्बानी इन्टरनेशनल स्कुलबाट पढाई पुरा गरेपछि श्लोकाले प्रिन्स्टन युनिभर्सिटी बाट मानवशास्त्रको पढाईगरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले लन्डनको स्कुल अफ इकोनमिक्स बाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरिन् र सन् २०१४ देखि रोजी ब्लू डायमन्डको निर्देशकको रुपमा काम गर्न थालिन् । श्लोकालाई पुस्तक पढ्न र समाजसेव ागर्नमा एकदम रुची छ । उक्त विवाहमा बलिउड हस्तीहरु आउने नै भए । विवाह समारोहमा बलिउड सेलिब्रेटीले विशेष प्रस्तुती समेत दिएका थिए । उक्त प्रस्तुतीको हालै भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा रणवीर कपूर, हार्दिक पान्ड्य, करण जौहर, नीता अम्बानी लगायतले मस्त नृत्य गरिरहेको देखिन्छ ।